दशैं, वेलायत र विस्तारित नेपाली संस्कृति | सीमान्त . marginal दशैं, वेलायत र विस्तारित नेपाली संस्कृति – सीमान्त . marginal
स्वदेशभित्र दशैंको विविधताले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक महत्वमा जे जसरी आकार फैलाउँदै गएको छ त्यसको प्रभाव विदेशिएका नेपालीहरूसँगै विश्वभर पनि देखिन थालेको छ। दशै झल्काउने राता टीका, जमरा, मठ-मन्दीर, पूजाआजाका कार्यक्रम व्यक्तिगत (पारिवारिक) र सामुदायीक स्वरूपमै विश्वभर देखिनु नेपाली संस्कृति बलियो हुँदै गएको संकेत हो। परदेशमा अवसरकालागि विदेशीएका असी लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू आफ्नो भाषा, संस्कृति प्रवर्धनका संवाहक पनि बनिरहेका छन्।
सामाजीक संजालका भित्ताहरूमा दशौं दिनदेखि दुर्गा भवानीको पुजापाठ गरेका, जमरा राखेका, टीका ग्रहण गरेका, परिकार र भेला जमघट गरेको दृश्यहरूले नेपालीमात्रलाई रोमाञ्चित नगर्ने कुरै भएन। भलै कसैकसैले दशै बहिष्कार गरेको शन्देश दिन खोजे पनि नेपालकै बहुल धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, भाषा, बर्ण र जातीय पहिचान दिएको देख्दा विवधताले सम्पन्न नेपाली नागरिक हुनुमा गर्व नहुने कुरै भएन।
हो, हामी सयौं थुँगा फूलका एउटै माला नेपाली हौं। हाम्रो पहिचान विविधता र सहिष्णुतामा जिवन्त रहँदै आएको छ। हामीलाई सगरमाथाको देश प्यारो लाग्दछ। हामीलाई भगवान वुद्धले शान्तिका वाणी र व्यवहारको अन्तर्य सिकाएका छन्। हामी वुद्धका अनुयायी त हुँदै हौं।
वेलायतमा पनि यस वर्षको दशैं विविध कार्यक्रमका साथ पूर्णिमासम्म सम्पन्न हुँदै छ। स्थानीय अल्डरसटमा ‘शीव कल्चरल एन्ड कम्युनिटी सेन्टर’ द्वारा नवनिर्मित शीव मन्दीरको यसै माहौलमा प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न गरिएको छ। विदेशमा नेपालीको यति ठूलो शिव मन्दीर (पशुपतीनाथ) शायदै अन्यत्र होला। नेपाली कै दान, चन्दा सहयोगले यो मन्दीरले पूर्ण आकार हासिल गर्न सफल भएको छ। यसको कार्यसमिति पुज्यारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा लागी परेको समितिका कोषाध्यक्षले यस लेखकलाई बताए। यसै क्रममा स्तरिय सेवा संचालनका लागि स्थायी आम्दानीको स्रोत जुटाउनु पर्ने नित्तान्त कठीन चुनौति रहेको यथार्थ पनि सुनाए। आशा छ, मन्दीर निर्माणमा जुटेका नेपाली मन मस्तिष्कले स्थायी आम्दानीको स्रोत पनि जुटाउन सफल हुनेछन्।
शीव मन्दीरको वाहिरि भाग
दशै मनाउने शिलशीलामा घुमघाम गर्दै अल्डरसट पुगेको हाम्रो समुहलाई स्थानीय नाङ्लो नेपाली रेष्टुरेन्टको स्वादले तानेरै छाड्यो। नेपाली थाली, चटपटे, पानीपुरी, सेकुवा, लसी, चाउमीनका परिकार जुन खायो त्यही स्वादिष्ट थिए।
नेपाली परिकारको स्वाद र शीव मन्दीरको दर्शन पश्चात हाम्रो समुह भिक्टोरिया क्रसले सम्मानीत पहिलो नेपाली, सेकेन्ड वटालीयनका कुलवीर थापाको शालिक अनावरण गरेको स्थान तर्फ लग्यौं। बेलायती सेनाको सबैभन्दा ठूलो सम्मानीत पदक भिक्टोरिया क्रस (भिसी) पाउने गोरखा सैनिक कुलवीर थापा पहिलो नेपाली गोरखा शैनिक हुन। उनैको कुलविरको शालिक अल्डरसटको प्रिन्सेस गार्डेनमा अनावरण गरिएको हो। अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस गार्डेनमा निर्मित सालिक बौद्ध परम्पराअनुसार लामा र हिन्दु परम्पराअनुसार पण्डितले पूजापाठ गरेपछि अनावरण गरिएको थियो।
कुलवीर थापाको शालिक
अघिल्लो वर्षको दशैंमा नेपालीहरू कै समर्पणमा निर्मित, बुद्ध गुम्बा (मन्दीर) मा स-परिवार गरेको दर्शन, प्रसाद ग्रहण र गुरूहरूसँगको वार्तालापले कहिल्यै नछुटने गरी मोहनी लगाएको छ। अत्यन्त मनमोहक, व्यवस्थित गुम्वा र ‘ओम् मणी पद्मे हूँ’ जप्दै वुद्ध दर्शनमा तल्लिन हुँदाको क्षण त्यस्तै अविस्मरणिय रहेको छ।
करिव दुई घन्टाको यो घुमघाममा हामीले नेपालै जस्तो लाग्ने गरी सडक वरिपरी हिंडिरहेका नेपाली समुहहरू, गुम्वा, मन्दीर, परिकार र व्यावसायका साथै इतिहासको रोचक स्मरण गर्न सक्यौं। बिशेषगरी, हामी पछिको पुस्ताले समेत त्यो अनुभव र गौरवलाई नेपाली भनेर स्मरण गर्न सक्यो त्यो पक्ष चाहीं झनै उल्खनीय रहन सकेको अनुभूति भयो। यस्तो गौरवपूर्ण नेपाली पनको अनुभव दिलाउन सफल विदेशमा रहेका कर्मयोगी नेपालीहरूलाई यस क्षणमा सादुवाद नदिइ रहन सकिंदैन।
Previous Postगीतसँग जोडिएका प्रसङ्गNext Postसम्झनामा प्रेमसिंह धामी : ‘काठमाडौंलाई किन दुख्दैन कालापानी ?’